Kolontsaina an-tsehatra : Misokatra ho an’ny rehetra ny sekoly fampianarana teatra -
AccueilVaovao SamihafaKolontsaina an-tsehatra : Misokatra ho an’ny rehetra ny sekoly fampianarana teatra
10/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Kolontsaina mandala fotoan-tsarotra. Misedra olana amin’izao fotoana ny tontolon’ny tantara an-tsehatra eto Madagasikara, na izany aza, tsy miraviravy tanana amin’ny fampivoarana io kolontsaina an-tsehatra io ireo mpikirakira. Misokatra ho an’ny rehetra ny sekoly fampianarana teatra na ny « Académie de théâtre » izay efa nisokatra hatramin’ny taona 2016. Raha tetsy amin’ny Tahala Rarihasina no nisy azy teo aloha, dia nifindra eny amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala, etsy amin’ny tranombokim-pirenena Anosy izany manomboka ny 15 avrily izao. Hatramin’io daty io ihany koa ny fara-fisoratana anarana ho an’ireo liana handalina sy hianatra ny tontolon’ny teatra sy ny manodidina azy. Ny Kaompania Johary izay tarihin’i Henri Randrianieranana, no tompo-marika amin’io sekoly io sy ny fiofanana atolotra. « Ny teatra dia zava-kanto iainana. Noho izany, afaka mandray anjara avokoa ny rehetra. Ny talata sy ny sabotsy no hanaovana ny fampianarana, ary araka ny ora maha-afaka ny tsirairay », araka ny fanazavan-dRasolondraibe Haingotiana, talen’ny sekoly. Lohahevitra maro no entina amin’ny fiofanana toa ny fanofanana ireo mpilalao sy ny mpilalao matihanina, ny fifandraisana aman’olona sy ny fitarihina amin’ny teatra, ny fanehoan-kevitra amin’ny fihetsika , ary ny mandray anjara fitenenana imasom-bahoaka.
Raha tsiahivina dia tamin’ny taonjato faha-19, taorian’ny nandefasan’ny frantsay ho sesitany ny Mpanjaka Ranavalona III tany Alzeria, no nampivoatra ny zava-kanto an-tsehatra, ka tao anatin’izany ny vako-drazana, ny kabary ary ny Teatra. Anisan’ireo tropy voalohany nanasongadina ny teatra ny Tropy Jeannette, izay mbola mijoro hatramin’izao. Anisan’ny toerana nahasarika mpijery maro isaka ny faran’ny herinandro teo aloha ny Teatra Monisipaly Isotry. Toerana izay tsy nisy fanatsarana sy fanajariana ka nihasimba hatrany. Nihena ihany koa taty aoriana ireo mpijery noho ny tsy fisian’ny tantara vaovao. Lasa toeram-pivavahana rahateo taty aoriana io toerana io. Efa nohajaraina indray taty aoriana ny tranompokonolona Analakely, nefa mbola sahirana amin’ny fampiasana azy ireo tarika mpilalao teatra. Eo am-piandrasana izay fivoarana eo amin’ny tontolon’ny fampisehoana izay, dia efa dingana amin’ny fampiroboroboana io kolontsaina io ny fisian’ny sekoly fampianarana.